Ikhamera IQ: Sebenzisa ukungathandwa kwenyani (i-AR) ukwenza iiMveliso eziSebenzayo zokuzama | Martech Zone
Ikhamera IQ, akukho qonga loyilo lwekhowudi yeNyaniso eNdisiweyo (AR), isungule Umqambi oQhelekileyo wokuZama, isixhobo se-state-of-art sokuyila esenza ukuba ikhawuleze kwaye ibelula kwiimpawu zobuhle, zokuzonwabisa, zentengiso, kunye namanye amacandelo ukwakha ubuchule I-AR-based Virtual Try-On amava. Isisombululo esitsha sicinga kwakhona ukurhweba nge-AR ngokwenza ukuba iimveliso zenze ukuba zibe nokuchaneka kwiimveliso zazo ngokuchaneka okwenyani ukuya ebomini kunye nokwenyani ngelixa zisongeza uluhlu lwezinto ezinophawu kunye nokuqaqamba okungafaniyo okubandakanya nokukhuthaza abathengi ngeekhamera zabo.
Ngelixa ezinye izisombululo zifuna ixesha elinomdla lokubhala kunye neendlela zoqwalaselo okanye imveliso ebanzi kunye nophuhliso, i-Camera IQ ye-Virtual Try-On Composer yenza ukuba kube lula kwiimveliso ukwakha amava e-ART kwisikali sexesha, kunye akukho khowudi efunekayo. Esi sixhobo sinika uluhlu lwezinto ezinokwenziwa ngokwezifiso ezinika ii-brand uguquko ukwenza ngokulula amava e-AR ngeeparameter ezithile ezinje ngombala, imilo, ubume, ukugqiba, kunye nokunye. Okanye banokulayisha ngokulula iimodeli zabo ze-3D, kunye Umqambi oQhelekileyo wokuZama iguqulela ngokuzenzekelayo iimveliso kwikhamera ukuze zibandakanywe kulo naliphi na iphulo.
Ngokungafaniyo nezinye iteknoloji yokuzama ngokuthe ngqo, ku Ikhamera IQIimpawu zinokuphucula amava abo okuzama ukuzama uluhlu olunemizobo eyenzelwe ukuphucula ukubandakanyeka, unxibelelwano kunye nokwabelana. Umqambi wokuzama ukuzama ukuza kunye nelayibrari yeetemplate ezikhethiweyo eziyilelwe ukufezekisa iinjongo ezithile zeshishini njengokunyusa ulwazi lokwazisa ngemveliso, ukuqhuba ukuthengisa ngokubonakala kwemveliso kunye nokusetyenziswa, ukufundisa abathengi ngendlela yokusebenzisa imveliso yabo, kunye nokunye. Amabhanti angenza ngokwezifiso iitemplate zamava e-AR, kunye nokuyila amanqaku asebenzisanayo kumava abo ngokongeza izinto ezinokubangela ukuba zivele okanye izinto zenzeke kwizinto ezithile ezibangela, njengomsebenzisi uvula umlomo okanye ucofe into. Ikhamera IQ emva koko ihambisa amava e-AR kwisikali kuyo yonke i-Facebook, i-Instagram, i-Snapchat, kunye namanye amaqonga, evumela abaphulaphuli ukuba bavule intetho yabo yoyilo ngelixa bezama iimveliso zohlobo.
Ukukhutshwa kweKhamera ye-IQ yamvanje kukutshintsha umdlalo kweqela lam. I-UI entsha inomdla kakhulu kwaye ibhetyebhetye kakhulu. Isakhono sokongeza iiasethi ze-3D kunye nokuzisebenzisa kwimeko yokwenyani ye-3D yenza ukuba sikwazi ukuthatha ukwenziwa kwethu koyilo kwinqanaba elilandelayo ngokukhawuleza nangokulula.
UDoug Wick, uMlawuli woYilo loMxholo eNestlé Purina eMntla Melika
Ikhamera ye-IQ yokuzama ukuzama ukuqamba umqambi
Ikhamera IQ yenza ukuba iimveliso zibandakanye abaphulaphuli kwaye zithengise iimveliso phantse kuzo zonke iindawo zokuchukumisa zohambo lwabathengi. Besebenzisa iqonga labo elingenakhowudi kwiqonga lezorhwebo lwe-AR, abathengisi banokuguqula iimveliso zabo kunye nomyalezo wophawu lube ngamava ayinyani atyebileyo okwenyani nokuzama kunye nemikhankaso yabathengi kwezentlalo.
Njengeqela lehlabathi elisebenza ngeempawu zamanye amazwe ezinje ngeViacom, iAtlantic Record, iNestle, i-EA, iMAC cosmetics, kude, nangaphezulu, i-Camera IQ isebenza kuwo onke amashishini ukubandakanya izigidi zabathengi mihla le.
Akukho mathandabuzo ekusebenzeni kwe-AR kwizilingo ezinokubakho, kodwa sisiqalo nje esinokwenziwa yi-AR ukuzisa iimveliso kunye nabaphulaphuli kunye. Ayisiyiyo kuphela i-AR yokuqhuba urhwebo lwentlalo ngokunceda abathengi ukuba babone iimveliso, kodwa ibenza ukuba banxibelelane nemveliso ngeendlela ezintsha ngokwenza isenzo sobumbano. Xa iimveliso zitshata ukusetyenziswa kunye nokuzonwabisa kwe-AR, kulapho babona eyona mpembelelo inkulu kwi-ROI yabo: amaxabiso okuzibandakanya ayenyuka, kwaye amathuba okuguqulwa anyuka ngama-250%. Sazisa i-Virtual Try-On Composer ukunceda iimveliso zikhawulezise isicwangciso-qhinga sezorhwebo, imiqobo esezantsi yophuhliso, kwaye yenze kube lula ngokulula ukwakha amava e-AR asebenzayo kunye nokubandakanya. Ngoku naluphi na uphawu lunokuba ngumdali we-AR!
UAllison Ferenci, u-CEO kunye nomseki-mbumbulu weKhamera IQ
Ukubhiyozela ukuphehlelelwa kwemveliso entsha yeVirtual-On, iKhamera ye-IQ isebenzisene nosaziwayo kunye nabaphumelele amabhaso okwenza amagcisa kubandakanya UDavid Lopez, UKeita Moore, UDoniella Davy, yaye U-Erin Parsons ukwenza ukubukeka kwedijithali okuphindaphinda ubugcisa bemveli bokwenza. Iimpawu zobuhle zinokuxhobisa abaphulaphuli babo ukuba bazame kuyo nayiphi na indibaniselwano yelipstick, iblush, eyeshadow, eyeliner, eyelashes, okanye izincedisi, zonke zinemibala ye-hyper-real, imilo, ubume, ukugqitywa, kunye nezinye izinto ezinokuhambelana neemveliso zehlabathi lokwenyani.
Iimpawu zentengiso zinokufaka ngokulula kwimveliso yazo ngokwasemzimbeni ukwenza amava avumela abathengi ukuba babone indlela iimveliso zabo eziza kuvela ngayo kwihlabathi lokwenyani, okanye iimveliso zomculo zinokuvumela abalandeli ukuba baphinde baphinde basayine umlobi wevidiyo okanye ikhava yealbhamu. Ubungakanani bamava okuzama ukuzama okwakhiwa kwi-Camera IQ's Composer ayinasiphelo.
Zama i-AR yekhamera ye-AR Cela iDemo
tags: Nyaniso eyongeziweyoikhamera iqeCommerceimveliso ukuzamaimveliso eyiyo ukuzamaUmqambi oQhelekileyo wokuZamaiteknoloji yokuzama ngokuthe ngqo